गुलामी राजनीतिको विगविगी कसरी बड्यो ? के गुलामी राजनीतिविना समाज र व्यक्ति चल्न सक्दैन ? केका लागि यो गुलामी ? राजनीतिले विगारेको देशमा सन्देह किन ? राजनीति केका लागि ? आम सर्वसाधारण जनतालाई पनि जर्वजस्ती राजनीति गराउन र गुलामी बनाउन वाध्य केका लागि ? विना गुलामी जनजीविका पनि संचालन गर्न नसक्ने अवस्थाका सिर्जना कसले गरायो ? यावत प्रश्नका जवाफका लागि जवाफकर्ता नै छैन ? त्यसो भए यो गुलामी राजनीति देश, समाज र आम जनतालाई कहाँ पुर्याउला ? यो सोच्ने र यसको समाधान कसले गर्ने ?
आम जनता र कार्यकर्ता भजाएर शक्ति र सत्तामा हालिमुहाली गरेर जीवनका उत्तरार्धमा पुगेर मानसिक पीडा र जनताका जीवनस्तरको मापन अन्य राजनैतिककर्मीले किन लेखाजोखा गर्न सकेनन् रु राजनीति देश र जनताका लागि हो कि व्यापार हो ? घरभित्रबाट शुरु भएको राजनैतिक गुलामी समाज, क्षेत्र, जिल्ला, केन्द्रसम्म जेलिएको छ । विश्वका अन्य राजनैतिक नेतृत्वको असल गुण र कर्मलाई नेपालका राजनैतिक नेतृत्वले किन अंगिकार गर्न सकेन ।